37 gawaarida dabaqyada dabaqa hoose ah waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan Kabataş - Bağcğlar Line | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul37 baabuurta tareenku hooseeyo ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan lineka Kabatas-Bagcilar
17 / 12 / 2010 34 Istanbul, Jadwalka Nidaamka Tareenka
Guddoomiyaha, kuwaas oo shaaca ka qaadi doonta marka hore by Kadir iyo Kabatas - Bağcılar iibsaday in ay buuxiyaan baahida sii kordhaysa rakaabka ee line 37 gogo 'oo gaari taraamka low-dabaqa ayaa dhex maray oo dhan imtixaanada.
Tirada baabuurta waxay tagi doontaa 92 kuwa leh adeegga geli doona. 5 iyo 2,5 waxay noqon doonaan daqiiqado 4 iyo 2 daqiiqado.
Maadaama ay baabuurtu ku yar tahay, ma jiraan wax tallaabooyin ama caqabad ku ah baabuurka. Sidan, rakaabka leh naafanimada, gawaarida ayaa awood u leh inay u raraan.
Maadaama ay qaybaha rakaabka iyo darawalku yihiin hawo qaboojiye leh qaboojiye hawada, dadka deggan Istanbul ayaan saameyn xun ku yeelan doonin xaaladaha xilliyeed. Meeleeynta kursiga ugu fiican ayaa loogu talagalay socodka rakaabka. Qorshaha gaadiidka, foomka tulip ayaa lagu dabaqay wasiirada hore, oo ay ku dhiirigeliso lulabada Istanbul.
Wadarta tamarta korontada 600 kW
Saacad Xawaaraha 70km / s
Dheecaan degdeg ah oo degdeg ah 2,8m / s
Cabbiraad culus oo culeyskiisu yahay 40 ton
Noocyada cusub ee teknooloojiyada ayaa lagu dabaqay baabuurta Istanbul.
Mishiinnada xakamaynta (koronto-socodka korontada) ayaa ah istiraatiijiyadaha loo isticmaalo tiknoolajiyada tareenka si dhaqso badan waxaana loo isticmaalay wax soo saarka guud ee Istanbul.
Gawaarida si buuxda loo ilaaliyo ayaa loogu talagalay inay ka ilaaliso mishiinka shilalka macquulka ah. Gaadiid badan oo rakaab ah ayaa lagu beegsaday xawaare degdeg ah oo degdeg ah.
Si darawalka dareenkiisa si joogto ah u firfircoonaado, gaariga waxaa lagu naqshadeeyay gacanta qofka dhintay iyo injineernimada ayaa lumay. Haddii ay dhacdo meel nabadgelyo leh waa la damaanad qaadayaa.
Nabadgelyada gudaha iyo safarka safarka ayaa la hagaajiyaa nidaamka kamaradaha wareegsan. Gawaarida waxaa lagu hayn karaa laynka gadaasha leh GPS.
Taariikhda: 31 December 2010 Jimce
Goobta Kulanka: Saldhigga Kabadas
BURULAS waxay qaadan doontaa gawaarida tareenka hoose ee hoose ee miisaaniyadda
Czech-China Joint Venture ayaa soo saari doona tareen hooseysa ee Shiinaha